intwasahlobo | Rayson
Ngamandla aqinile e-R&D namandla okukhiqiza, uRayson manje usephenduke umkhiqizi ochwepheshile nomphakeli onokwethenjelwa embonini. Yonke imikhiqizo yethu kuhlanganisa ne-bonnell spring yakhiwe ngokusekelwe ohlelweni oluqinile lokuphatha ikhwalithi kanye namazinga omhlaba. i-bonnell spring Rayson ineqembu lochwepheshe besevisi abanomthwalo wemfanelo wokuphendula imibuzo ephakanyiswe amakhasimende nge-inthanethi noma ngocingo, ukulandelela isimo sokuhamba, nokusiza amakhasimende ukuxazulula noma iyiphi inkinga. Ukuthi ungathanda ukuthola ulwazi olwengeziwe ngokuthi yini, kungani futhi senzani, zama umkhiqizo wethu omusha - bonnell spring , noma ungathanda ukubambisana, singathanda ukuzwa kuwe.Lo mkhiqizo unamandla okulwa namagciwane. Izindwangu zayo zizokwakha isihlangu esiqinile se-hydrophobic esivimbela ngokuphumelelayo ukwakheka kwamabhaktheriya namagciwane ngaphansi kwezimo ezimanzi.